Fitokanana ny FIP Antsirabe » Police Nationale
« 49 »: Le civisme
« 48 »: Ny Fitiavan-tanindrazana
« 47 »: Tanora
« 46 »: Toeran’i Madagasikara eo amin’izao tontolo izao
« 45 »: Sosialim-bahoaka
« 44 »: Ny toe-draharaham-pirenena
FANAMBARANA AVY AMIN’NY MINISTERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA 25 avril 2018
CSP3-ANTANINANDRO : LEHILAHY IRAY MPANGALATRA MOTO INDRAY NO TRA-TEHAKY NY POLISIN’NY BORIBORITANY FAHA-3 25 avril 2018
OLONA MIISA MIISA 23 NIKASA HANARARAOTRA HANDROBA NY ANDRON’NY 21 APRILY TEO NO VOASAMBOTRY NY UIR SY NY COMPAGNIE URBAINE D’INTERVENTION AVY EO ANIVON’NY POLISIM-PIRENENA, TSY AMPY TAONA NY 06 TAMIN’IZY IREO KA NAHAZO FAHAFAHANA VONJIMAIKA, NY 17 KOSA NOTANANA AM-PONJA AVY HATRANY 25 avril 2018
« Operation pick pocket nataon’ny SUT Tsaralalana
Fifaninanana ara-panatanjahantena Basket-ball karakarain’ny Polisim-pirenena any amin’ny faritra VAKINANKARATRA »
Fitokanana ny FIP Antsirabe
Notokanana tamin’ny Zoma, 19 Octobre 2012 ny Force d’Intervention de Police (FIP) ANTSIRABE.
Tonga nanome voninahitra sy nanokatra ny lanonana tamin’ny fomba ofisialy ny Minisitry ny filaminana anatiny sy ny Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena ary ireo tale sy lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny.
Nanatrika io fotoana io ihany koa ny lehiben’ny Faritra vakinakaratra izay nisolotena ny filohan’ny fahefana avon’ny tetezamita.
Tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena no nilazany fa ho toby filamatra io tobin’ny FIP vaovao io ka mba ho polisy mendrika tokoa no miasa ao. Nampahery ny polisy izay handray ny asany ao izy satria mafy ny asa miandry ao.
Ny lehiben’ny faritra kosa dia nilaza fa dingana lehibe izao vita izao ka mendrika hoderaina sy omen-tànana ary nitondra fisaorana avy amin’ny vahoakan’ny vakinankaratra ny tenany.
Niarahaba manokana ny vahoakan’ny Vakinankaratra kosa ny Minisitry ny filaminana anatiny satria nitady toko tokoa izy ireo ka sendra vato.Nanamafy ny fahavononan’ny Polisim-pirenena hiady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny tenany ary toky no nomena fa hizotra amim-pilaminana amin’izay ny fandriam-pahalemana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Nasiany teny ihany koa ny fisaorana ny lehiben’ny faritra sy ny ben’ny tanàna ny amin’ny fahavononan’izy ireo handray ity tobin’ny Polisy vaovao ity ka nanomezany ny tany nananganana izany. Mbola tsy ampy ny ho manaram_penitra io toby io noho ny hakelezan’ny toerana ka mangataka izy mba hitarina ny tany izay nomena ny Polisy satria na ny toerana asiana ny tranon’ireo mpitandro ny filaminana miasa ao aza tsy misy. Manantena ny fitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ireo malala Tanana isan’ambaratonga ny minisitra ary nampanan-tena vokatra tsara ho an’ny vahoaka.
Nitohy ny harivan’io ny fotoana izay natao tao amin’ny IMPERIALE tao Antsirabe antampontanana ka dinik’asa hanatsarana ny asan’ny Polisim-pirenena no natao tamin’izany izay teo amin’ny fitarihan’ny Minisitry ny filaminana anatiny sy ny tale jeneraly ary ireo tale sy lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny.
Nodinihina tamin’izany ireo tranga isian’ny olana amin’ny asa ataon’ny Polisim-pirenena izay nitadiavana vahaolana avy hatrany ka hampiharina tsy ho ela; isan’ny vahaolana nivoitra tamin’izany ny fampiofanana ny polisy mahakasika ny asa izay sahaniny sy ny fitadiavana vahaolana amin’ny famatsiana fitaovana ireo Biraon’ny polisy izay hita sy tsapa fa tena tsy ampy ary ny fampanjakana ny lalàna mifehy ny polisy amin’ireo izay amperin’asa.
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=1185